ရုရှားနိုင်ငံ Yuzhno-Sakhalinsk မြို့ အရှေ့ဘက်တွင် အင်အား ၅.၆ပမာဏရှိ ငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်
ရုရှားနိုင်ငံ Yuzhno-Sakhalinsk မြို့ အရှေ့ဘက် ၁၇၂ကီလိုမီတာ အကွာတွင် ဇူလိုင် ၁ရက် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် ၂၀း၄၅း၄၂နာရီတွင် ရစ်ခ်ျတာစကေး ၅.၆ပမာဏရှိ ငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း အမေရိကန်ဘူမိဗေဒတိုင်းတာရေး အဖွဲ့က ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ကြယ်ပွင့်တာတိုအပြေးသမား Su Bingtian က ၉.၉၁ စက္ကန့် ဖြင့် စံချိန်သစ်တင်
ပါရီ ၊ ဇူလိုင် ၁ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပါရီမြို့ ၌ကျင်းပလျက်ရှိသော 2018 IAAF Diamond League ပြိုင်ပွဲတွင် တရုတ်နိုင်ငံမှ ကြယ်ပွင့် တာတိုအပြေးသမား Su Bingtian သည် အမျိုးသားမီတာ ၁ဝဝ ပြေးပွဲ၌ ၉.၉၁ စက္ကန့် ဖြင့် တတိယနေရာမှ ပန်းဝင်ခဲ့ကြောင်း နှင့် ယင်းစံချိန်မှာ ၉ ရက်တာကာလတွင်း အာရှ စံချိန်သစ်တစ်ခုကို ထပ်မံချိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲရဲ့ ၁၆ သင်းရှုံးထွက်အဆင့် တက်ရောက်သွားတဲ့အသင်းများ (ဆင်ဟွာ)
၂၈.၆.၂၀၁၈. စတုတ္ထပွဲ - ပွဲပြီးရလဒ်​
​တူနီရှား ၂ - ၁ ​ပနားမား
အုပ်​စု G တွင်​နှစ်​သင်းလုံးယခုပွဲရလဒ်​ကအ​ရေးမပါ​တော့ဘဲပြိုင်​ပွဲမှထွက်​ရ
၂၈.၆.၂၀၁၈. တတိယပွဲ - ပွဲပြီးရလဒ်
ဘယ်လ်ဂျီယံ ၁ - ၀ အင်္ဂလန်
အုပ်စု G တွင်နှစ်သင်းလုံး နောက်တစ်ဆင့်တက်ရန်သေချာနေကြပြီ ဖြစ်ကာ ဘယ်လ်ဂျီယံက သုံးပွဲကစား သုံးပွဲနိုင် ၉ မှတ်နှင့် အုပ်စုပထမရကာ အင်္ဂလန်က အုပ်စု ဒုတိယရခဲ့သည်။ ၁၆ သင်း ရှုံးထွက်အဆင့်ပွဲ တွင် ဘယ်လ်ဂျီယံ က အုပ်စု H ဒုတိယ ဂျပန် အသင်းနှင့်ဇူလိုင်လ ၁ ရက်တွင်လည်းကောင်း၊အင်္ဂလန်က အုပ်စု H ပထမ ကိုလံဘီယာနှင့် ဇူလိုင်လ ၂ ရက်တွင်လည်းကောင်းမှာကစားရမည်ဖြစ်သည်။ (Xinhua)
၂၇.၆.၂၀၁၈. စတုတ္ထပွဲ - ပွဲပြီးရလဒ်
ဆွစ်ဇာလန် ၂ - ၂ ကော့စတာရီကာ
အုပ်စု E မှာ ဆွစ်ဇာလန်ဟာ သုံးပွဲကစား တစ်ပွဲနိုင်နှစ်ပွဲသရေ ၅ မှတ်နဲ့ အုပ်စု ဒုတိယ ရကာ ၁၆ သင်းရှုံးထွက်အဆင့်ကို တက်သွားပါတယ်။
ဆွစ်ဇာလန်က အုပ်စု F ပထမ ဆွီဒင် နဲ့ ဇူလ်ုင်လ ၃ ရက်မှာ ၁၆ သင်း ရှုံးထွက်အဆင့်ပွဲ ကစားမှာပါ။ ကော့စတာရီကာ နဲ့ ဆာဘီးယား တို့ကတော့ အိမ်ပြန်ရပါပြီ။ (Xinhua)
၂၇.၆.၂၀၁၈. တတိယပွဲ - ပွဲပြီးရလဒ်
ဘရာဇီးလ် ၂ - ၀ ဆာဘီးယား
အုပ်စု E မှာ တော့ ဘရာဇီးလ်က သုံးပွဲကစား နှစ်ပွဲနိုင်တစ်ပွဲသရေ ၇ မှတ်နဲ့ အုပ်စု ပထမရကာ ၁၆ သင်းရှုံးထွက် နောက်တစ်ဆင့်ကို တက်သွားပါပြီ။ ၁၆ သင်း ရှုံးထွက်အဆင့်ပွဲ မှာ ဘရာဇီးလ် က အုပ်စု F ဒုတိယ မက္ကဆီကို အသင်းနဲ့ ဇူလိုင်လ ၂ ရက်မှာကစားရမှာပါ။ (Xinhua)
ဂျာမနီနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းမြို့တွင် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား လူ ၁ ဦးသေဆုံး
ဘာလင်၊ ဇွန် ၂၈ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဂျာမနီနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း Bremen မြို့ရှိ လူနေအဆောက်အဦတစ်ခုတွင် ဇွန်လ ၂၈ ရက် နံနက်ပိုင်းက ပြင်းထန်စွာ ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် တုန်ခါသွားခဲ့ပြီး လူ ၁ ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ဒေသတွင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
၂၇.၆.၂၀၁၈. ပထမပွဲ- ပွဲပြီးရလဒ်
ဆွီဒင် ၃ - ၀ မက္ကဆီကို
ယခုပွဲ အနိုင်ရလို့ အုပ်စု F မှာဆွီဒင် နဲ့ မက္ကဆီကိုအသင်းတို့ကသုံးပွဲကစား နှစ်ပွဲနိုင်တစ်ပွဲရှုံး ၆ မှတ် စီ အမှတ်တူနေကြပြီးဆွီဒင်အသင်းက ဂိုးအသာနဲ့ အုပ်စုပထမ၊မက္ကဆီကို က ဒုတိယနဲ့ ၁၆ သင်းရှုံးထွက်အဆင့်တက်သွားကြပါပြီ။ည (Xinhua)